नरभक्षी बाघ नियन्त्रण गर्न हात्तीसहितको टोली परिचालन - Sadrishya
Friday, April 19, 2019 | info@sadrishya.com sadrishya2017@gmail.com
नरभक्षी बाघ नियन्त्रण गर्न हात्तीसहितको टोली परिचालन
चितवन, १३ भदौ : दक्षिण चितवनको माडीमा मान्छे मार्ने बाघ नियन्त्रणमा लिन चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले हात्तीसहितको टोली परिचालन गरेको छ ।
माडी नगरपालिका–९ स्थित गोविन्दबस्तीका ५६ वर्षीय जीतबहादुर राईलाई गत भदौ ७ गते वस्तु चराउन गएका बेला बाघले आक्रमण गरेर मारेको थियो । सो बाघ समस्याग्रस्त भएर बस्तीमा निस्किएको निष्कर्षसहित नियन्त्रणमा लिन टोली परिचालन गरिएको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत बेदकुमार ढकालले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार निकुञ्जका वरिष्ठ पशु चिकित्सक डा. कमल गैरेको नेतृत्वमा वन्यजन्तु प्राविधिकसहित ३४ जनाको टोली बाघ नियन्त्रणमा खटिएका छन् । बाघ समाउन छ वटा हात्ती प्रयोग गरिएको छ । बाघलाई डाट गरेर बेहोस बनाई नियन्त्रणमा लिइन्छ ।
‘बाघ बस्ती वरिपरिनै बसिरहेको छ, मान्छे मारेपछि गोठको एउटा बाच्छीसमेत खायो, त्यसपछि अहिले पाडो राखेर नियन्त्रण प्रयास जारी छ,’ प्रमुख ढकालले भने । उनका अनुसार मङ्गलबार नियन्त्रण गर्न लाग्दा बाघ फुत्किएको थियो आज पनि बिहानैदेखि सो क्षेत्रमा बाघ नियन्त्रणका लागि टोली खटिएका छन् ।
यसअघि साउनको २१ गते भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर २५ स्थित राप्तीदुन मध्यवर्ती सामुदायिक वनमा घाँस काट्न गएकी सुशीला डुम्रेलाई बाघले मारेको थियो । त्यसपछि नियन्त्रणमा लिएको बाघ मरेको निकुञ्जले जनाएको छ । बाघ बूढो भएर मरेको ढकालले जानकारी दिए । रासस
Apr 19, 2019 तितो कफीमा मोहित हुनुको कारण
Apr 19, 2019 रथ तान्दा ढुङ्गा हानाहान, नौ घाइते
Apr 19, 2019 देउवामाथि उठ्यो नैतिक प्रश्न ?
तितो कफीमा मोहित हुनुको कारण
देउवामाथि उठ्यो नैतिक प्रश्न ?
उपत्यकाको खानेपानी समस्या हल गर्न योजना बनाएर अघि बढेका छौं : खानेपानी मन्त्री
बिहेको लागि अनमोल केसीको रोजाइकी युवती